နတ်သုဒ္ဓါနဲ့မလဲနိုင်အောင် ??? ထူးခြားကောင်းမွန်လွန်းလှတဲ့ တရုတ်ဟင်းလျာ……. – FoodiesNavi
နတ်သုဒ္ဓါနဲ့မလဲနိုင်အောင် ??? ထူးခြားကောင်းမွန်လွန်းလှတဲ့ တရုတ်ဟင်းလျာ…….
By yin sandi On January 19, 2018 0
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ??????? တရုတ်အစားအစာဟာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့လျှာဖျားမှာ ??? ခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ဟင်းလျာတွေကို မြန်မာတွေအကြိုက်တွေ့လှတာကြောင့် နေ့စဉ်မီးဖိုချောင်မှာ ??‍???‍??? ချက်ပြုတ်စားသောက်ရင်တောင်မှ တရုတ်ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်းတွေကို လေ့လာသင်ယူပြီးနေ့စဉ်စားဖွယ်ရာအနေနဲ့ ????? ချက်ပြုတ်စားသောက်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒီလိုနေ့စဉ်သုံးဆောင်နေပေမယ့် Foodies တို့အနေနဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ဟင်းလျာအသစ်အဆန်းတွေကိုတော့ မြည်းစမ်းခံစားကြည့်ချင်စိတ်တွေ ??? ဖြစ်ပေါ်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Foodies Navi ကနေ အရသာထူးခြားကောင်းမွန်ပြီး တရုတ်ဟင်းလျာအသစ်အဆန်းလေးတွေရရှိနိုင်တဲ့ ? Wang Wang Chinese Food & BBQ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုလမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။ ??????
တရုတ်ဟင်းလျာဆိုင်တွေထဲမှာ နာမည်ကြီးပြီးသားမို့ အထွေအထူးမိတ်ဆက်ပေးနေစရာမလိုပေမယ့် ??? သွားရောက်မသုံးဆောင်ဖူးသေးတဲ့ Foodies တို့အတွက်ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့– ?????
အမှတ်(၁၆၀) ၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း ၊ ရန်ကုန် ဖြစ်ပါတယ်။ Wang Wang Chinese Food & BBQ မှာရရှိနိုင်တဲ့ဟင်းလျာတွေကတော့– ?????????? အမဲကလီစာပြုတ်ကြော် ၊ ငါးချိုချဉ်ဆော့ ၊ ကျောက်ပုဇွန်(ချိစ် ၊ ဂျင်းမြိတ်ကြော် ၊ အစိမ်းစားပေါင်း) ၊ ငါးမြစ်ချင်းအစပ်ပေါင်း ၊ သစ်သီးဖျော်ရဉ်အမျိုးမျိုး ၊ ဂျန်တို့ဟူးချိုချဉ်စပ် ၊ ငါးသားလုံးကြော် ၊ ငါးခေါင်းပေါင်း ၊ ဝက်အူပြုတ် ၊ ခရမ်းသီးဝက်သားကြော် ၊ ဝက်သွေးလုံးဝက်သားခြောက်ကြော် ၊ ဝက်စတူးငရုတ်ကောင်းဆော့ ၊ ကြက်ပြုတ် ၊ ကျောက်ငါး ၊ ငါးမန်းတောင် ၊ ရတနာငါးမျိုးဟင်းရည် ၊ ကင်းပုဇွန် ၊ ရေဘဝခြောက်စပ်ကြော် ၊ ပုဇွန်မာယောနိစ်ဆော့ ၊ ပန်းဂဏန်း ၊ ဥဖြူဝက်ရိုးမြေအိုး ၊ ငါးပုလဲခရုဆီဆမ်းကြော်ချက် ၊ ငါးမုတ်ကြော် ၊ ဆိတ်နံရိုးအခြောက်ကြော် ၊ ဝက်မြီးမြေအိုး စတဲ့ဟင်းလျာဆန်းဆန်းလေးတွေကို မြည်းစမ်းခံစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???
လတ်ဆတ်တဲ့ ??????? ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ ???????? အသားငါးတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းချက်ပြုတ်ထားတာကြောင့် ??‍???‍? စိတ်ချယုံကြည်စွာသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? နူးညံ့အိစက်ပြီးအရသာထူးခြားနေတဲ့အသားငါးတွေနဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပူပူလောင်လောင်လေး ♨️♨️♨️ သုံးဆောင်လိုက်ရတဲ့အခါ လျှာပေါ်မှာအရသာစိမ့်ထွက်လာပြီး ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ လည်ချောင်းထဲစီးဝင်သွားတဲ့အရသာဟာ နတ်သုဒ္ဓါနဲ့မလဲနိုင်အောင် ထူးခြားကောင်းမွန်လွန်းလှပါတယ်။ ??? ဒီလိုအရသာထူးကဲမှုတွေကို ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့အတူ မျှဝေခံစားနိုင်ဖို့အတွက် အပြေးလေးလှမ်းသွားလိုက်တော့နော်။ ??‍♀️??‍♂️??‍♀️
Image Source : www.facebook.com/wangwangchinesefood&bbq